Windows 10 fampahavitrihana ny Key – Official Activator
Tsara ny vaovao avy any Morehacks ekipa! Fantatray fa te-mihazakazaka Windows vaovao 10 amin'ny PC fa tsy te-hividy ny fahazoan-dàlana. Now we offer you a Windows 10 fampahavitrihana ny Key! Izany no azo atao noho ny rindrambaiko noforonina avy amin'ny ekipa ny matihanina rindrambaiko. They created a Windows 10 Activator, izay miteraka fanalahidy ho an'ny Windows 10 tena mora. Manome antoka fa isika rehetra fahazoan-dàlana niteraka dia 100% miasa. Ho tanteraka mihazakazaka ny tena Windows 10.
Raha manana Windows 7/8/8.1 amin'ny PC dia afaka vaovao farany ny rafitra ho Windows 10, fa ianareo kosa tsy ho afaka ny hankafy ny endri-javatra rehetra, dia toy ny: vaovao farany, am-baravarankely 10 haino aman-jery foibe, Microsoft biraon'ny 10 ary maro kokoa. Ho voatery hividy ny fahazoan-dalana raha te-hampiasa Windows 10 amin'ny endriny feno hery. ankehitriny, with this Windows 10 Fampahavitrihana ny Key Generator Afaka mampihetsika Windows 10 tena mora! Efa nizaha toetra fitaovana izany ary efa niasa tsara. Ireto ambany ireto dia afaka mahita ny fomba hampavitrika Windows 10:
2. Open Settings, ary tsindrio / paompy ny Windows tsy mampandeha. Activate Windows now.
3. Tsindrio / paompy ny Hampiditra manan-danja bokotra. Tokony hanokatra ny varavarankely eto ambany
4. Open the Windows 10 Product Key Tool ary handika ny CD-key niteraka
5. Raha efa adika ny 24 isa fehezan-dalàna araka ny tokony ho, eto ambany ny varavarankely no hiseho
6. tsindrio eo amin'ny ”Manaraka” bokotra, ary miandry ny fotoana fohy. Raha ny zava-drehetra ny OK, ny varavarankely avy any ambany no hiseho
7. Now close the window and enjoy Windows 10 tena
Noho izany, Inona no miandry? Download now the Windows 10 Fampahavitrihana Key Tool sy mankafy Windows 10!